ကောင်းကင်ကို: 01/01/2011 - 02/01/2011
ကျွံထွက်လာမယ့် လက်တွေဆို ဖြတ်ဖို့အသင့်။
Posted by Kaung Kin Ko at 10:23 AM 12 comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 12:45 PM 12 comments: Links to this post
လူတယောက် ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ကျနော့်ကို လက်ပြပြီး နှုတ်ဆက်လာတယ်။
အဲဒီ့လူကို ကျနော် ရင်းရင်းနှီးနှီးကြီးကို သိနေတယ်။ ဘယ်သူမှန်း တော့ ချက်ခြင်းစဉ်းစားလို့ မရဘူး။ ဒါနဲ့ ဦးနှောက်ကို အလျင်အမြန် အလုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။ သြော...အီလက်ထရွန်းနစ် သင်တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်း။ သူက ကျနော့်ထက် အသက်နည်းနည်း ကြီးပေမယ့် ရွယ်တူလို ပေါင်းမှ ကြိုက်တဲ့လူ။ (တကယ်က ကျနော့် အထင်မှားတယ်ဗျ။ အီလက်ထရွန်းနစ် သင်တန်းကလူ မဟုတ်ဘူး။ ဦးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း)
ကျနော်လည်း သင်တန်းတုန်းကသူငယ်ချင်းထင်ပြီး ခေါ်နေကျ အတိုင်း ပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။
နည်းနည်း လျှောက်လာပြီးမှ ဦးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းမှန်း စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတယ်။
အလကားနေ အလကား ပိုက်ဆံရအောင်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ ကြိုးဖုန်းကို အိမ်ရှေ့ မှာထုတ်ထားတယ်။ မြို့ တွင်း၊ နယ်ဝေး ဖုန်းခေါ်ချင်ရင် ရသလို အနီးအနားတဝိုက်က အိမ်တွေကို ဖုန်းလာရင်လည်း ခေါ်ပေးတယ်။
တရက်တော့ မျက်စောင်းထိုးတိုက်က ခေါင်းရင်းခန်း လေးလွှာကို ဖုန်းလာတယ်။ နယ်က ကျောင်းသားတွေ ငါးယောက် ခြောက်ယောက်လောက် စုပြီး ငှားနေကြတဲ့ အခန်း။ အဲဒါ ကျနော် သွားခေါ်ပေးရတယ်။ ကျနော့် မှတ်ဥာဏ်ကလဲဗျာ...လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကြိုးကို ဆွဲပြီးမှ သူတို့ ထဲက ဘယ်သူ့ ဆီလာတဲ့ ဖုန်းမှန်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့သူတို့ ထဲက တယောက်က ရှိသမျှ နာမည်တွေ ကျနော့်ကို ရွတ်ပြတယ်။
“ဟာ..ဟုတ်ပြီ...ဟုတ်ပြီ…ကြွက်စုတ်…ကြွက်စုတ်”… ‘စုတ်’ပါတာကို ကျနော် မှတ်မိတယ်။
ကျနော်လုပ်လိုက်တာနဲ့ သူတို့နာမည်လှလှလေးတွေ အကုန် ပေါ်ကုန်ပြီ။
ကျနော်တို့ အခန်း(မြေညီထပ်) မှာ တံခါး နှစ်ထပ် ရှိတယ်။ အပြင်ဆုံးက တံခါး (အပြာရောင်ရယ်)၊ ဖိနပ်ချွတ်ခန်းနဲ့ ဧည့်ခန်းကြားက တံခါး(အနီရောင်ရယ်)။ ဖိနပ်ချွတ်အခန်း မှာ တိုက်တခြမ်းလုံး (ခြောက်လွှာလုံး) အတွက် ရေမော်တာငါးလုံးကို စုပြီး ထားထားတယ်။ အဲလို တံခါးနှစ်ထပ်ရှိတော့ အပေါ်ထပ်ကလူတွေ မော်တာ ပြင်ရင် ကိုယ်က စောင့်ကြည့်နေစရာ မလိုတော့ဘူး။ အတွင်းတံခါး(အနီ) ကို ပိတ်ပြီး နောက်ဖေးခန်းထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေး ဝင်နှပ်နေလို့ ရတယ်။ သူတို့ မော်တာ ပြင်နေတုန်း မြို့ ထဲထွက်ချင်ရင်လည်း အပြင်တံခါး (အပြာ) ကို မော်တာပြင်ဖို့ ဖွင့်ပေးထားပြီး အတွင်းတံခါး (အနီ) ကို သော့ခတ်ပိတ်ခဲ့ပြီး ထွက်လိုက်ရုံပဲ။
သာမန်အချိန်တွေမှာတော့ ကျနော်တို့က တံခါး နှစ်ထပ်လုံးကို သော့ခတ်ပြီးနေလေ့ရှိတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ တရက်...
ငယ်ငယ်တုန်းက ဆရာမ တယောက် အလည်လာတယ်။ တအိမ်လုံး ခရီးထွက်သွားပြီး ကျနော်တယောက်တည်းပဲ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အချိန်။ ဆရာမပြန်တော့ ကျနော် တံခါးလိုက်ပိတ်ရတာပေါ့။ ဧည့်ခန်းကနေ ဖိနပ်ချွတ်ခန်း အရောက်မှာ အတွင်းတံခါးကို အပြင်ဘက် (ဖိနပ်ချွတ်ခန်းဘက်)ကနေ ကျနော် အမှတ်တမဲ့ သော့ခတ်လိုက်မ်ိတယ်။ဆရာမလည်း ဖိနပ်ချွတ် အခန်းကနေ မြေကြီးပေါ်လည်း ရောက်ရော ခဏလောက် ဟိုငေးဒီငေးလုပ်ပြီးမှ အပြင်တံခါး ကို တံခါးနှစ်ခုကြားကနေ ဖိနပ်ချွတ်ခန်း ဘက်ကနေ(အတွင်းကနေ) သော့ခတ် လိုက်မိပြန်တယ်။ ဟာ...သော့တံ က အိမ်အတွင်း ထဲက ချိတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ မေ့ခဲ့ပြီ။ တံခါးနှစ်ခုလုံးကိုလည်း အမှတ်တမဲ့ သော့ခတ်ထားမိပြီ။ ကျနော် တံခါး နှစ်ခု ကြားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိတ်မိသွားပြီ။ ဆရာမကလည်း အဝေးကို ရောက်သွားပြီ။
အဲဒါနဲ့ ကျနော် လူဖြတ်အသွားကို စောင့်ရတယ်။ တော်သေးတယ်။ ညကြီး မဟုတ်လို့ ။ ပထမဆုံး ဂျာနယ်ရောင်းတဲ့ လူတယောက်ဖြတ်သွားတယ်။ ကျနော် ပြောတာကို နားထောင်ပေမယ့် ခပ်တည်တည်နဲ့ မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ထွက်သွားတယ်ဗျာ။ နောက် မျက်စောင်းထိုး တိုက်က ကျနော် တိတ်တခိုးကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေး ဖြတ်သွားတော့မှ လှမ်းခေါ်ပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့ သံဖြတ်လွှ တောင်းလိုက်ရတယ်။ ရှက်လိုက်တာ။
ကျနော့်ကျောင်းနဲ့ အဆောင်က သိပ်မဝေးဘူး။ လမ်းလျှောက်သွားရင်လည်း ငါးမိနစ်လောက်ပဲ ကြာတယ်။ တခါတလေလည်း စက်ဘီးနဲ့ သွားတယ်။ တရက်တော့ …. ကျောင်းကနေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားတပြောပြောနဲ့ ပြန်လာပြီး အဆောင်ရောက်တော့ ရေတွေဘာတွေချိုးလိုက်သေးတယ်။ ခဏနေလို့ မြို့ ထဲသွားမယ်လုပ်မှ ‘ဟာ…စက်ဘီးကျောင်းမှာ မေ့ကျန်ခဲ့ပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်လာမိပြီ။’ အဲဒါနဲ့ ကျနော် ကျောင်းကို စက်ဘီးပြန်သွားယူရပါရော။ ဒါပေမယ့် စက်ဘီးကို ချက်ခြင်းပြန်မရခဲ့ပါဘူး။့ တယောက်ယောက်ကများ ခိုးသွားလို့ လား? ဒါမှ မဟုတ် အစောင့်တယောက်ယောက်ကပဲ သိမ်းပေးထားလို့ လား? တခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် အဆောင်ကနေ ကျောင်းကို စက်ဘီးပြန်သွားအယူမှာ စက်ဘီးသော့ကိုဖွင့်ဖို့ သော့တံက အဆောင်က စားပွဲပေါ်မှာ မေ့ကျန်ရစ်ခဲ့လို့ ပါ။ အဲဒီ့နေ့ က ကျနော် အဆောင်နဲ့ ကျောင်းကို အခေါက်ခေါက် လမ်းလျှောက်လိုက်ရတယ်။
ကျနော့် စက်ဘီး ဘီးပေါက်နေလို့ သူငယ်ချင်း စက်ဘီးကို ငှားပြီး မြို့ ထဲကို ထွက်ခဲ့တယ်။ မြို့ ထဲရောက်တော့ ဝယ်စရာရှိတာတွေ ဝယ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးမို့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ တနာရီလောက် ဂျာနယ်ဖတ်ရင်းနဲ့ ထိုင်လိုက်တယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းပြီးလို့ ပြန်မယ်လည်း လုပ်ရော…
“ဟိုက်၊ ငါစီးလာတာ ဘယ် စက်ဘီးမှန်း မမှတ်မိတော့ဘူး။” ကျနော်က ကျနော့်စက်ဘီးပဲ စီးနေကျ ။ သူ... သူ့ ရွာကနေ စက်ဘီးယူလာတာကလည်း မကြာသေးဘူး။ ကျနော်လည်း တခါမှ သူ့ စက်ဘီးကို သတိထား မကြည့်မိဘူး။ စီးတုန်းကလည်း ဒီအတိုင်း နမော်နမဲ့နဲ့ တက်စီးလာတာ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာကလည်း စက်ဘီးတွေက အများကြီး။ အခုနေ တဘီးချင်း လိုက်စမ်းပြီး သော့ဖွင့်နေရင်လည်း စက်ဘီးသူခိုး လို့ ထင်ကြဦးမယ်။ ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်း စက်ဘီးလို့ ထင်ရတဲ့ ဘီးတွေ သူများစီးသွားလို နည်းသွားတဲ့ အချိန်ကျမှ ဆိုင်ရှင်ကို ပြောပြီး စမ်းကြည့်ရတယ်။ ဒုတိယ ဘီးမှာ ကျနော့်အထင်မှန်သွားတယ်။ ဟူး!!!
မေ့တာတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျ။ တခါတခါကျတော့ မေ့တယ်ဆိုတာထက် အစကတည်းကကို နမော်နမဲ့နဲ့ သတိမထားမိတာ။ (သူများစက်ဘီးစီးပြီး ဘယ်စက်ဘီးမှန်း မသိတော့တာ လိုမျိုးပေါ့) တခါတခါကျတော့လည်း အာရုံများပြီး မေ့သွားတာ။ များသောအားဖြင့် ကျနော်မေ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ နစ်နေလို့ မေ့သွားတာမျိုး၊ သတိမထားမိတာမျိုးတွေက ပိုများတယ်။ ကျနော်က အတွေးသမားလေ။ ထမင်းစားရင်လည်း တွေးတတ်တယ်။ သွားတိုက်ရင်းလည်း တွေးတတ်တယ်။
ကျနော့်သွားပွတ်တံတွေဆို ကျနော် သွားတိုက်တိုင်း တွေးရင်း သွားပွတ်တံက brush အမျှင်တွေကို ဝါးဝါးပစ်လို့ ဝယ်ပြီး နှစ်ပတ်လောက်နေရင် မကောင်းတော့ဘူး။ တခါလည်း ဆောင်းတွင်းကြီး။ တောင်ကြီး ခြံထဲက လူမြင်ကွင်းမှာ ကျနော် သွားတိုက်တုန်း အတွေးလွန်ပြီး တယောက်တည်းပြုံးနေလို့ ခြံရှေ့ ကဖြတ်သွားတဲ့လူတွေက ကျနော့်ကို ပြုံးစေ့စေ့နဲ့ကြည့်သွားကြတာကို အမက မြင်သွားပြီး အပြစ်ပြောတယ်။ လူတွေကလည်း ခက်တယ်။ တယောက်တည်း ငိုနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ သူစိတ်ဆင်းရဲစရာ ရှိလို့ ဆိုပြီး နားလည်ပေးကြတယ်။ ကြောင်တယ်လို့ မထင်ကြဘူး။ တယောက်တည်း ပြုံးပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားပြီထင်ကြတယ်။ သူများပြုံးနေနိုင်တာကို မနာလိုတဲ့သဘောများလား။ ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း ကျနော် ဆင်ခြင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေချိုးနေတုန်းဆို မတွေးမိအောင် မစဉ်းစားမိအောင် သတိထားတယ်။ တော်ကြာ အာခီမီးဒီး(စ်)လို ဖြစ်သွားမှ ဒုက္ခ….
ကျနော်မေ့တာတွေ သတိလက်လွတ် ဖြစ်တာတွေ အရမ်းများနေပြီ။ ထမင်းဘူးဆိုလည်း မေ့ကျန်ခဲ့ပေါင်းများပြီ။ ထီးဆိုလည်း ဝယ်ရပေါင်းများပြီ။ ချိန်းထားပြီး မေ့သွားပေါင်းလည်းများပြီ။ တခါကလည်း ကျောင်းက သမဆိုင်က ဗလာ စာအုပ် တဒါဇင်ကို ဈေးချိုချိုနဲ့ ထုတ်ပြီးမှ အတန်းထဲက အံဆွဲထဲမှာ မေ့ကျန်ခဲ့တယ်။
တခါတခါ မေ့တတ်တဲ့ ဝသီက ဘဝကိုပါ ထိခိုက်လာတယ်။ မဖြစ်ဘူး။ တခုခုတော့ လုပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။
အနာသိရင် ဆေးရှိရမှာပေါ့။ တရက် အမေ့အိမ် စာအုပ်ဆိုင်မှာ ကျနော်စာအုပ် တအုပ်တွေ့တယ်။ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းအောင် လေ့ကျင့်တဲ့နည်းတွေ ပါတဲ့စာအုပ်။ စာအုပ်နာမည်လား? အခု မေ့သွားပြီ။ ရေးတဲ့သူကိုလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒါ အဲဒီ့စာအုပ်ကိုတွေ့တော့ ကျနော် အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီး လှန်လှော ကြည့်မိတယ်။ မဆိုးဘူးပဲ။ အဲဒီ့ထဲမှာ နည်းတွေတော်တော်စုံတယ်။ တူရာ group လုပ်ပြီး မှတ်နည်းတွေ၊ gist ထုတ်ပြီး မှတ်နည်းတွေ၊ ကာရန်လေးတွေ ချိတ်ပြီး မှတ်နည်းတွေ၊ ကြံကြံဖန်ဖန် စိတ်ကူးပြီး မြင်ယောင်ပြီး မှတ်နည်းတွေ….ကြံကြံဖန်ဖန်စိတ်ကူးပြီး မှတ်တယ်ဆိုတာက ဒီလို…ဥပမာ ရုံးမှာ ထမင်းဘူး မေ့ကျန်တတ်တယ် ဆိုပါတော့။ ရုံးတံခါးပေါက်မှာ ဆန်ကောလောက်ကြီး ရှိတဲ့ ထမင်းဘူးအကြီးကြီး ပိတ်နေလို့ ရုံးအပြင်ကို ထွက်လို့ မရဘူးလို့ လေးငါးခေါက်လောက် မြင်ယောင်ပြီး စိတ်ကူးကြည့်လိုက်။ ရုံးက ပြန်ခါနီးတိုင်း စိတ်ကူးကြည့်လိုက်။ အကျင့်ရသွားတဲ့အခါ ရုံးတံခါးပေါက်ကထွက်မယ်လုပ်တိုင်း ထမင်းဗူးကို သတိရလိမ့်မယ်။ နည်းတွေက ကြောင်တောင်တောင်နိုင်ချင် နိုင်နေလိမ့်မယ်။ ကိစ္စမရှိဘူး။ မှတ်မိဖို့ အဓိက မို့လား။
စာအုပ်က ရေးထားသေးတယ်။ အဲဒီ့ထဲက လေ့ကျင့်နည်းတချို့က ညဘက် လူသံသူသံ တိတ်တဲ့ အချိန်ကျမှ အေးအေးဆေးဆေး သက်တောင့်သက်သာ ကျင့်ရင် ပိုထိရောက်တယ်တဲ့။ ကျနော် လေ့ကျင့်မှ ဖြစ်တော့မယ်။
ကျနော် စာအုပ်ကို လှန်လှောကြည့်ပြီး သဘောကျသွားတယ်။ ငါ့နှယ် စောစောက တွေ့ခဲ့ရင် ပြီးရော။ စာအုပ်ကို မြည်းကြည့်နေတုန်းမှာပဲ ကျနော်မေ့တတ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ် တခုကို နည်းတခုသုံးပြီးမှတ်လိုက်တယ်။ နံပါတ်က ၅၄၁၃၅၇။ ကျနော့်စိတ်ကူးထဲမှာ ငါးလေးတကောင် ရေကန်ထဲမှာ ကူးခတ်နေတာကို မြင်ယောင်လိုက်တယ်။ ဒါဆို ရှေ့နှစ်လုံး “၅၄” ကို မှတ်မိပြီ။ နောက်လေးလုံးကလည်း မခက်ဘူး။ မဂဏန်းတွေ အစဉ်လိုက်။
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က လိပ်စာပေးတာကိုလည်း သတိရလိုက်တယ်။ သူနေတဲ့ တိုက်က ရွှေမာလာ အိမ်ယာ။ အခန်းက G3။ အဲဒါကို ကျနော်ဘယ်လို မှတ်ရရင် ကောင်းမတုန်း။ “မာလာ” ကို G3 နဲ့ ချိန်လိုက်တယ် လို့မှတ်လိုက်ရမလား။ သိပ်မကောင်းသေးဘူး။ မာလာကို ကိုယ်တိုင် အမြောက်နဲ့ ချိန်ထားတယ် လို့မှတ်လိုက်တယ်။ အမြောက်ကို သတိရရင် G3 ကို သတိရမယ်။ မာလာကို သတိရရင် ရွှေမာလာ အဆောင်ဆိုတာကို သတိရမယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ မာလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း တကယ်ရှိတယ်လေ။
ရုတ်တရက် ကျနော့်ကောင်မလေးနဲ့ ညနေ ခြောက်နာရီလောက် ချိန်းထားတာကို သတိရမိတယ်။ ခုက တနာရီခွဲပဲ ရှိသေးတယ်။ ခါတိုင်းတော့ သင်တန်းက အပြန် သူနဲ့ချိန်းထားတာကို မေ့မေ့ပြီး အိမ်ကိုတန်းပြန်မိလို့ ပြဿနာ တက်ပေါင်းလည်းများပြီ။ ဒီတခါတော့ မမေ့စေရဘူး။ အရပ်ပုပု ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ ဘီလူးမကြီး နာရီတကြည့်ကြည့်နဲ့ ငါ့ကို စောင့်နေတယ်လို့ မြင်ယောင်ပြီး မှတ်လိုက်မယ်။ ပါးစပ်ကလည်း ဘီလူးမ၊ ဘီလူးမ၊ ဘီလူးမ ဆိုပြီး သုံးခါရွတ်လိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော် စာအုပ်ဆိုင်ကနေ စာအုပ်တွေဝယ်…ပြီးတော့ သင်တန်းကိုသွား။ သင်တန်းမှာလည်း သတိရတိုင်း ဘီလူးမကြီး နာရီကြည့်ပြီး စောင့်နေပြီ လို့ စိတ်ထဲကနေ ခဏခဏ တွေးလိုက်သေးတယ်။ ဒီတော့ သင်တန်းပြီးတော့ ကောင်မလေးနဲ့ ချိန်းထားတာကို မမေ့တော့ဘူးပေါ့။ တယ်ဟုတ်ပါလား။
ဒီနေ့ ကျနော် တော်တော်လန်းနေတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ ချိန်းထားတာလည်း မမေ့တော့ဘူး။ သင်တန်းမှာ Resistor ရဲ့ colour code တွေကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နည်းထွင်ပြီး ကာရန်လေးတွေ ချိတ်ပြီး မှတ်လိုက်တာ လုံးဝ အဆင်ချောသွားတယ်။ တယ်ဟုတ်ပါလား။ ဒါတောင် မှတ်ဥာဏ်ကောင်းအောင် လေ့ကျင့်နည်း စာအုပ်ကို ဖတ်ရသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆိုင်မှာ ခဏလောက် လှန်လှောမြည်းစမ်းကြည့်တာပဲ ရှိသေးတာ။ တအုပ်လုံးဖတ်ပြီးလို့ လိုက်ကျင့်ပြီးသွားတဲ့ အခါဆိုရင်တော့…
အခု အလုပ်တွေလည်း ပြီးသွားပြီ။ လူသံသူသံ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အချိန်လည်းရောက်ပြီ။ စာအုပ်ထဲက မှတ်ဥာဏ်ကောင်းနည်းတွေကို စပြီးလေ့ကျင့်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ။ ကျနော် ကျောပိုးအိတ်ကို ဖွင့်လိုက်တယ်။
“ဟိုက်…စာအုပ်တွေအကုန်လုံး စာအုပ်ဆိုင်က ငွေရှင်းတဲ့ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းပြီးမှ မေ့ကျန်ခဲ့ပြီ”။
ကျနော် ဘန်ကောက်က ABAC တက္ကသိုလ် မှာ တယောက်တည်း ထိုင်ရင်း wireless နဲ့ အင်တာနက် သုံးနေတုန်း engineering က မြန်မာကျောင်းသား တစု ရောက်လာပြီးတော့
“အကို… ဒီမှာ ကြာဦးမလား မသိဘူး။ ကျနော်တို့ ဆရာနဲ့ ခဏ သွားတွေ့မလို့။ ဒီပစ္စည်းတွေ ခဏ ကြည့်ထားပေးလို့ ရမလားမသိဘူး”
မီိတာတွေ ဘာတွေ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ laptop တလုံးလည်း ပါသလိုလိုပဲ…
“ရတယ်ညီ။ အကို ညနေအထိ ရှိဦးမှာ”
ကျနော်သုံးရင်းသုံးရင်းနဲ့ ရေဆာလာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ရေဗူးကလည်း မေ့ခဲ့ပြန်ပြီ။ ဒီကြားထဲ ဗိုက်ကပါ နည်းနည်းဆာလာတာနဲ့ 7-11 စတိုးဆိုင်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဆိုင်ကနေ ပေါင်မုန့်တလုံးဝယ်..ဗိုက်ဖြည့်ပြီးတော့ အိမ်ကို ခဏပြန်လိုက်သေးတယ်။ ခဏနေမှ engineering က ကျောင်းသားတွေ ကိုယ့်ကို ပစ္စည်းအပ်ခဲ့တာကို သတိရလို့ ကျောင်းကို ပြန်ပြေးရတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ပစ္စည်းတွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ သူတို့ကိုလည်း မတွေ့ဘူး။
နောက်နေ့ သူတို့နဲ့ လမ်းမှာ ပြန်တွေ့တော့ ကျနော့်ကို မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်သွားတယ်။ ဘာသံမှ မကြားရဘူးဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေ မပျောက်လို့နေမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့လာသည်အထိ စောင့်မပေးပဲ တမင်ပြန်သွားတယ်လို့ ထင်လို့လား မသိဘူး။ ကျနော့်ကို မခေါ်တော့ဘူး။
Posted by Kaung Kin Ko at 3:44 PM 8 comments: Links to this post
Labels: jokes, short story
အလွတ်လပ်ဆုံး အလုပ်ကို လုပ်ရတာ
Posted by Kaung Kin Ko at 11:40 AM 11 comments: Links to this post